Mad Experiments 2: Escape Room ine zuva rekuburitsa | Linux Addicts
Mad Experiments 2: Escape Room ine zuva rekuburitsa
Chitoro cheSteam chine chimwe chinhu chitsva chaungade kana iwe uchida Escape Room theme. Iri ndiro zita remutambo wevhidhiyo. Mad Experiments 2: Escape Room iyo ichave iripo yeWindows, macOS, uye zvakare yeSteamOS / Linux kubva Kurume 8, zuva rakasimbiswa zviri pamutemo kutanga kwayo. Parizvino, unogona kungoiwedzera kune yako yekuda rondedzero.
Yakanyanya mutambo wevhidhiyo unonakidza une puzzle-maitiro matambudziko uye makamuri ekutiza ayo yakagadzira PlayTogether Studio. Iro zita rinovimbisa uye rauchabatikidzwa kwariri kwemaawa kuti uedze kuzadzisa zvinangwa uye kuwana zvese zvakavanzika.
Chikwata chekusimudzira chatoseka zvauchawana mune tsananguro: "Akavharirwa muimba isinganzwisisike yaProfessor Cheshire, vatambi vachafanira kuongorora uye kubatana kuti vabude mumakamuri munguva yakatarwa. Kamuri yega yega ine zvakavanzika zvayo, zvirahwe… uye zvikamu zvenyaya yaHildegarde naProfessor Cheshire. Dzidza zvakawanda nezverwendo rwaHildegarde kuCheshire Institute. Kubva kuraibhurari kuenda kuimba yakavanzika kuenda kuimba yekurara, sangana nevatsva mavara, zvakavanzika, zvinonetsa, uye zvinoshamisa zviitiko. Ko Hildegarde achawana nzira yekutiza? Uye newe?"
Kana zvakadaro hunhu kubva Mad Experiments 2: Escape Room, inonyanya kukosha ndeiyi:
Iyo inogutsa kwazvo online Escape Room chiitiko.
Zvikwata zvevatambi vanosvika matanhatu zvinogona kuumbwa.
Kudyidzana, kutaurirana, kuongorora, kuunganidza zvinongedzo, uye kugadzirisa mapikicha akaoma pamwe chete ndiyo nzira chete yekukunda.
Iine 3 makamuri + sumo.
Nguva shoma, 60 min pakamuri.
Zorora modhi ine isina muganho nguva.
Akasarudzika mapuzzle uye bvunzo dzaunoongorora uye nekudyidzana nezvakawanda zvezvinhu zviri muimba huru.
Victorian steampunk nharaunda, ine yakangwarira magirafu, ine inoshamisira nzvimbo uye yakakosha mimhanzi mamiriro.
Iri zita rinovanza kuseri kwenyaya inonakidza yaHildegarde naProfessor Cheshire iyo inozokukwezva iwe kubva pakutanga, uye ichakufadza iwe paunofambira mberi kuburikidza nezviratidzo.
Kana uchindida Tiza Simulator, imwe huru yemhando iyi, pano une imwe imwe nzira yekuti kana waneta neyakapfuura.
Rumwe ruzivo rweMad Experiments 2: Escape Room - chiutsi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Mad Experiments 2: Escape Room ine zuva rekuburitsa
GNOME maapplication uye KDE application yakatarisana, nekuti ma desktops haangori iwo graphical nharaunda (DE)